Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguDorota
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uDorota iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Zacisze Zielone Ogrody ibekwe kwilali encinci ebizwa ngokuba yi-Moniuszeczki, kufutshane ne-Biebrzański National Park kunye nomzila webhayisekile we-Green Velo.
Zininzi iingenelo zomhlalaphantsi wethu, ezifana neekayak kunye nebhayisekile ezirentisayo okanye isidlo sakusasa esimnandi esenziwe nguLandlady. Sinamagumbi ama-4 anamagumbi okuhlambela abucala, kunye nama-3 anegumbi elinye ekwabelwana ngalo.
Indlu ebekwe phakathi kwamasimi kunye namadlelo ixatyiswa ngokwenene ziindwendwe, ngenxa yokuthula okunokuthi kuphazamiseke kuphela ziintaka eziculayo, iitrektara ezidlulayo okanye ukuntyiloza kwamasele ngorhatya.
Kwiikhilomitha ezili-10 ukusuka eZacisze Zielone Ogrody kukho umlambo i-Biebrza, kunye ne-Biebrzański National Park ezaliswe ziintlobo ezikhethekileyo zezityalo kunye nezilwanyana, ngakumbi iintaka. Kwi-Biebrza Valley ungafumana eyona ndawo iyimigxobhozo emikhulu yasePoland, apho ixhama elidumileyo lafumana eyona ndawo ilungileyo yokuhlala.
Sinokukunceda ngokucwangcisa iindlela zeebhayisekile zakho okanye ii-kayaks’runoffs. Siyakuvuyela ukukunika iingcebiso malunga nokunyuka intaba okanye eyona ndawo ilungileyo yokutya isidlo sangokuhlwa. Sinamaphecana abakhenkethi kunye neemephu ezininzi ezineendlela ezilungileyo.
Sinokukunceda ngokucwangcisa iindlela zeebhayisekile zakho okanye ii-kayaks’runoffs. Siyakuvuyela ukukunika iingcebiso malunga nokunyuka intaba okanye eyona ndawo ilungileyo yokuty…